Cayaarihii kubbadda cagta hablaha Yurub oo maanta bilaabanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cayaarihii kubbadda cagta hablaha Yurub oo maanta bilaabanaya
La daabacay tisdag 9 juli 2013 kl 10.37
Cayaaraha kubbadda cagta hablaha ee Horyaalka Yurub oo Iswiidhen ay qabanqaabineyso ayaa galabka bilaabanaya. Waxaa cayaarahaan lagu furayaa cayaar ay iskaga hor imaanayaan kooxda qaranka Iswiidhen iyo kooxda Danmaarki. Iswiidhen waxay ku rajo weyn tahay in ay meel dheer ka gaarto inta cayaaruhu socdaan. Weriye ka socda Raadiyaha oo lagu magacaabo Lasse Persson wuxuu aamminsan yahay in ay Iswiidhen kaalin wanaagsan ka geli doonto cayaarahaan,
- Waxay ila tahay dabcan in Iswiidhen ay gaari doonto ciyaarta Fiinalka . waa arrin xiisa leh in bilyeetiga ciyaaraha si aad loo iibanayo marka Iswiidhen waxay heli doontaa taageerayaal fiican. Taageerayaasha waa muhiim marka ay ciyaartu tahay bar baro waayo ciyaartooyda waxay maqalayaan qeylada taageerayaasha oo dhabarkooda taagan markaasi ayay isku dayayaan in ay kordhiyaan dadaalka.
Marka ay furmayaan ciyaaraha kubada cagta ee gabdhaha maalinta berita ah, waxay noqon doonaan rikoodh weyn. Ilaa iyo imminka waxaa la iibiyay in ka badan 100 000 oo bilyeeti taasi oo ah mid ka badan kala bar guud ahaana waa la iibsaday bilyeetiga ciyaaraha Iswiidhen.
Ciyaartii tababarka ee toddobaadkii hore, gabadhaha Iswiidhen waxay kaga adkaadaan xulka Ingiriiska 4-1 taasi oo ah guul weyn oo ay gaareen xulka gabdhaha Iswiidheen waxayna in badan oo ah dadka qaadaa dhiga ciyaaraha ku turjumeen guushaasi Iswiidhen mid muujineysa in ciyaartoyda ay ku jiraan xaalad wanaagsan.
Lasse Persson, weriyaha xagga ciyaaraha ee Radiosporten ayaa sheegaya in ay u muuqato isbedel weyn oo xagga kalsoonida ah oo ay yeesheen ciyaartoyda qaranka kubada cagta dalka tan iyo markii leylinta xulka ay la wareegtay Pia Sundhage oo imminka heysata tababar ugu waangsan xagga dumarka caalamka kubada cagta sanadkii hore soo leylisay xulka gabdhaha Mareykanka.
- Wax eed ah looma hayo tababarihii hore Thomas Dennerby, laakiin waxay u egtahay in ciyaaryahanada ay la qabsadeen in ay ku dhiiradaan in ay dhahaan ’’waynu guuleysan doonaa’’ ’’waxaynu u soconaa guul’’ ’’ waan wadeynaa’’ . Pia, tababarada waxay ka timid Mareykanka marka ugu dambeysay waxayna u eg tahay in wax xoogaa Mareykanimo oo ah in la dhaho waxaan nahay kuwa ugu weyn, ugu fiican uguna quruxda badan laakiin waxay ila tahay arrin qurux badan in la dhiirado.
kulamada koobka horyaalnimada kubada cagata qaaradda yurub ee dumarka ayaa waxaa lagu kala ciyarai doonaa ilaa iyo toddobo magaalo oo Iswiidhen ku yaalla. Ciyaarta daah furka ayaa waxay dhex mari doontaa Iswiidhen iyo Danmarka maalinta Arbac iyada oo lagu ciyaari doono magaaladda Göteborg.
Laakiin iyada oo aysan bilaaban ciyaaraha, ayay dadka ku xeeldheer kubada cagta waxay leeyihiin in imminkaba ay cadahahay in Iswiidhen ay guul ka ka soo hoyn doonto ciyaaraha waxaa dadka sidaasi aminsan ka mid ah weriye Lasse Persson. Oo sheegay in xulka kubada cagta gabdhaha Iswiidhen ay sammeeyeen horumar aan la maleysan kareen.